Yako Saiti Iri Pasi? Dhatabhesi? | Martech Zone
Unoziva here? Zvakadii nezve database yako? Domain yako iri kugadzirisa here? Yako saiti uye mapeji kumusoro asi kungo shandira dhata zvikanganiso?
Isu takatove nemuenzaniso mavhiki mashoma apfuura apo saiti yedu yainyatsoshanda, asi isu tanga tichimhanyisa mumatambudziko nenhamba yekubatana kwedhatabhesi. Nehurombo, isu takawana nemutengi asina kufara achitizivisa. Haana kunzwisisa kuti nei aifanira kuzviunza kwatiri - anga akarurama!
Vatungamiri vangu vakanga vaita chinhu chakanaka uye vakasaina nebasa rekuongorora. Yakanga iri sevhisi yakachipa mutengo pa $ 49.95 pamwedzi. Pandakapinda, ini ndakabva ndarasika ndichiedza kutsvaga nzira yekufamba asi ndakazoona kuti taingogadzirisa peji redu rekumba. Isu takange tisiri kuyedza chitupa cheSSL, isu tanga tisingayedze edu madunhu, isu tanga tisingatarise kana dhatabhesi iri kupindura kana kwete.
Ini ndakakurumidza kutanga kuwedzera imwe cheki ndokufambisa iyo nguva kubva pamaminitsi mashanu epakati kusvika paminiti miniti. Pandakadzvanya kuendesa iyo 'wachi' nyowani, ndakakatyamadzwa kuona kuti ini ndaizobhadhariswa $ 5 setup fizi uye imwe $ 1 pamwedzi. Ndizvozvo - madhora makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe ekumisikidza yechimwe chinhu chandakamisa !!! Ini ndakabuda ndikatanga kutsvaga sevhisi nyowani.
Ini ndakasvetuka pa Twitter (yangu injini yekutsvaga nyowani) uye shamwari yakanaka, Ade Olonoh of Kudzokorora Basa, akauya kuzondinunura. (Kuwedzera blogging - shoma twitter Ade!)
Ade akanongedza kwandiri Pingdom. Pingdom ine inoshamisira yakachena interface ine yakasimba kwazvo maficha. Ini ndakaronga akati wandei API inodaidzira kunyorera kwedu kuti tione kuti dhatabhesi raimhanya uye ipapo ini ndinogadzira Pingdom kupfuudza mafoni uye kutarisa mhinduro.
Basa racho rine musoro zvakare. Iyo yekutanga ndeye $ 9.95 / mo uye inobvumidza macheki mashanu, makumi maviri emaSMS meseji, email isingagumi, nguva yekukwirisa uye kurodha nguva, anotarisa pasi kusvika paminiti yega yega, HTTP, HTTPS, TCP, Ping uye UDP cheki, nezvimwe. 5 mameseji eSMS. Ivo zvakare vane yakasimba kwazvo API kana iwe uchida kubatanidza yako yekutarisa.
Iwo mavhavha ekuongorora ari muDallas, Berkeley, Amsterdam, Vasteras, uye Kuverenga. Ndiri kuedza kutsvaga kana Ini ndakasimbisa nePingdom kuti tinogona kupfuura iyo SMS nekungovaka email runyorwa rwemaSMS email kero efoni dzevashandi vedu.
Ini ndakanyorawo kambani nechikumbiro chechinhu. Zvingave zvinonakidza kana, parutivi neemail uye maSMS chenjedzo, ivo vakatendera Chikumbiro cheHTTP. Izvi zvaizondibvumidza kuti ndione mumwe wevatatu vedu vevatengesi vebato anga achive nenyaya munguva pfupi yapfuura. Kana ini ndikagona kuti Pingdom iite chikumbiro kuseva yangu, ini ndaigona kungochinjisa masevhisi edu pamusoro pe backup. Kana iyo system ikadzoka, ndaigona kuidzosera kumashure. Ini ndaigona kuita izvi neemail; zvisinei, kunonoka kwacho kunogona kutiruma.
Tasara nemazuva makumi maviri nemapfumbamwe mukutongwa. Chero bedzi isu tisingavone chero nyaya, isu ticha svetuka pane yakakosha pasuru. Izvo chete zvichatiponesa mabhuru mashoma uye zvinotipa imwe yakawanda yakazara saiti yekutarisa!
OSX Bug: Dzosera mufananidzo kune gumi nematanhatu maTerabyte?
Zvimwe paBlogIN, Vhidhiyo